Dejinta Buundada Yavuz Sultan Selim ee Bixinta Dammaanadda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulQalabkii Yavuz Sultan Selim Bridge ee Garanti Bixinta
28 / 05 / 2019 34 Istanbul, GUUD, hyperlinks, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Yavuz Sultan Selim iyo qaybta Northern Perimeter Road ee adeega, shirkadda gobolka ee shirkadda si ay u bixiso lacag bixinta shirkadda damaanadku waxay tixgelin doontaa lacagta dollarka laba taariikh oo kala duwan. Bixinta, Janaayo badhka hore ee sanadka, qeybta labaad ee bisha July waxay noqon doontaa aasaaska lacagta doolarka. Taariikhda gobolka uu sameyn doono lacagta ayaa sidoo kale la beddelay. Sidaa darteed, 1 waxaa loo balanqaadi doonaa January-31 bisha July ee sanadkaas isla markaana 1 bisha July-31 December waxaa la bixin doonaa bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
IC Isteş İnşaat - Astaldi Consortium ICA waxay ka hawl gashaa Yavuz Sultan Selim Bridge iyo Waddada Peripheral Woqooyi. Shirkaddu waxay codsatay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ka dib markii ay sii kordheen shibbada sarrifka dollarka bishii Agoosto ee 2018.
Wuxuu tilmaamey isbeddelka qiimaha sarrifka wuxuuna codsaday isbedelka habka xisaabinta ee lacag-bixinta lagu sameeyo damaanada. Bishii Janaayo qeybtii hore ee sanadka, qeybtii labaad ee July ee sicirka sarrifka dollar wuxuu ku salaysan ajandaha.
XISBIGA SIDA LAGU QAADO MADAXWEYNAHA
HaberturkOlcay Aydilek'in Sida laga soo xigtay warbixinta, Wasaaradda Gaadiidka iyo Agaasimaha Guud ee Wadooyinka, ayaa daraasaddan ka qaaday arrintan. Daraasadda ayaa dhawaan la soo gabagabeeyay. Iyadoo la ansixiyey iyo saxeexa hayadaha awoodda leh, ayaa la soo saaray hab cusub oo xisaabin.
Muxuu qaabka cusubi saadaalinayaa? Ka hor inta aanad ka jawaabin su'aashaan, aan kuu sheego habka lacag bixinta hore.
Yavuz Sultan Selim iyo buundooyinka Osmangazi, Gawaarida Eurasia iyo Isku-xirka Istanbul-İzmir waxaa dhisey qaybo gaar ah oo leh qaab-dhismeed-wareejinta. Mashruucyadan, lacagaha la goosto ayaa loo go'aamiyey sidii isbeddelka ajnabiga.
Gobolku wuxuu ballan-qaadey tiro gaadiid oo gaar ah mashaariicdan. Haddii gaadhigu ka hooseeyo xaddiga dammaanadda, dawladdu waxay bixisaa faraqa. Tusaale ahaan, lacagaha damaanad qaadka ah ee sanadka 2018 ayaa la sameeyay bishii Abriil ee 2019. Xilliga lacag bixinta, 2 wuxuu ku saleysnaa qiimihii USD ee USD 2018. Dawladdu waxay bixisay tirade 3 Million 650 Milyan TL si ay u siiso shirkadaha ku habboon tirooyinka gaadiidka ee la cayimay.
Haatan waxan eegnaa nidaamka lacag bixinta cusub. Yavuz Sultan Selim iyo qaybta Northern Perimeter Road ee adeega, shirkadda gobolka ee shirkadda si ay u bixiso lacag bixinta shirkadda damaanadku waxay tixgelin doontaa lacagta dollarka laba taariikh oo kala duwan. Bixinta, Janaayo badhka hore ee sanadka, qeybta labaad ee bisha July waxay noqon doontaa aasaaska lacagta doolarka.
Taariikhda gobolka uu sameyn doono lacagta ayaa sidoo kale la beddelay. Sidaa darteed, 1 waxaa loo balanqaadi doonaa January-31 bisha July ee sanadkaas isla markaana 1 bisha July-31 December waxaa la bixin doonaa bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Ka waran mashaariicda kale? Mashaariic kale ayaan weli wax laga beddelin. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegay in tallaabadani ay abuurayso "mudnaan leh" waxaana suurtagal ah in la fuliyo codsi la mid ah mashaariicda kale.
Wadada Woqooyi Baaskiilka
Kor u kaca Yavuz Sultan Selim Bridge